NISSAN Calendar 2013 Kalendari - Dhizaini magazini
Chipiri 24 Nyamavhuvhu 2021
Kalendari Mwaka wega wega Nissan inogadzira kalendari pasi pemusoro wenyaya waro weti tagline "Kunakirwa kwakasiyana nemamwe ese". Iri 2013 2013 rizere nemeso-anovhura uye akasarudzika mazano nemifananidzo semhedzisiro yekudyidzana nenziyo yekutamba-pendi "SAORI KANDA". Mifananidzo yese iri pakarenda mabasa aSAORI KANDA mutambi-wependi dhanzi. Akasimudzira kurudziro yake yaakapihwa nemotokari yaNissan mumapendi ayo ayo akadhonzwa zvakatwasuka pakatoni yakaiswa mu studio.
Zita rechirongwa : NISSAN Calendar 2013, Vagadziri zita : E-graphics communications, Izita remutengi : NISSAN MOTOR CO.,LTD.
Dhizaini timu yezuva
Zvikwata zvepasirese zvekugadzira.
Svondo 22 Nyamavhuvhu 2021
Dzimwe nguva iwe unoda timu yakakura kwazvo yevanogadzira matarenda kuti vauye nemhando dzakanaka kwazvo. Mazuva ese, tinoratidza akasiyana-mubairo-kuhwina hunyanzvi uye yekugadzira dhizaini timu. Ongorora uye tsvaga yekutanga uye yekugadzira zvivakwa, yakanaka dhizaini, fashoni, grafiti dhizaini uye dhizaini mapurojekiti kubva kumatimu ekugadzira pasi rese. Wana kufemerwa nemabasa epakutanga naatenzi vanogadzira.
Kalendari E-graphics communications NISSAN Calendar 2013